परिवारनियोजनका अस्थायी साधन धेरै प्रयोग गर्ने महिलामा पनि धेरै समस्या देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय युवा पुस्ताले गर्भपतनका औषधिलाई परिवारनियोजनको साधनका रूपमा लिने क्रम बढ्दो छ । यस्ता महिलाको रगत धेरै जाने समस्या हुन्छ । निलोकन चक्कीको धेरै प्रयोग गर्दा पनि रगत धेरै बग्ने हुन्छ । इम्प्लान्ट प्रयोग राम्रोसँग नहुँदा समस्या आउँछन् । परिवार नियोजनका साधनको सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा क्यान्सर भएका र रगत जाने बिरामी धेरै छन् । -नयाँ पत्रिकाबाट
वाइडबडी खरिद अनियमितता, मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अर्को झुट
वैकल्पिक राजनीतिको बहस : विचार मिल्नेसँग एकता गर्न डा. बाबुराम तयार काठमाडौं– नयाँ शक्तिका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई सुदृढ गर्न विवेकशील साझासँग एकताका लागि आफूहरू खुला रहेको बताएका छन् । डा. भट्टराईले दुबै पार्टीहर...
पर्वत बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेकाे संख्या सात पुग्याे, सनाखत हुन बाँकी